Göteborg oo gacan qabaneeysa shaqsiyaadka ka soo laabta kooxdda argagaxisadda ah | Somaliska
Islamka & Yurub
Göteborg oo gacan qabaneeysa shaqsiyaadka ka soo laabta kooxdda argagaxisadda ah
Guud ahaan degmooyinka dalka ayaa waxaa ay aad ugu liitaan siddii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen gacan qabashada ama qaabiladaada dhalinyaradda dib uga soo laabata kooxaha islaamiyiinta ah sida Daacish iyo wixii la mid ah.
Saas oo ay tahayna dowladda kama indhaha la’a dhibaatooyinka la rusan yahay ee shaqsiayadkaaasi xambaarsan yihiin markeey dib u soo laabtaan. Balse maamulka Angered ee Göteborg ayaa haatan doonaya ineey baadi goobaan kooxahaasi marka ay dib ugu soo laabtaan si bulshadda looga bad baadiyo.
“Waxaan u arkaa tani ineey tahay hab lugu bad baadin karo bulshadda, kuwaani hadda markeey bulshadda soo dhex galaan ma sameeyn karaan xaalad halis ah, balse waxeey saameeyn karaan looxaha ee bulshadda ku jira” ayey tiri Bettan Byvald oo ah gacan sare ka tirsan xafiiska arrimaha bulshadda (ceyrta) ee degmadda Angered. Bettan waxaa kale oo ay sheegtay in shaqsiga doonaya inuu la kulmo maamulka ay marka hore ku filan tahay masuul ka tirsan xafiiska arrimaha bulshadda iyo askari ciidan ah.
Bettan Byvald, howl wadeen ka tirsan xafiiska arrimaha bulshadda ee deg Angered. Sawirka: SVT
“Waxeey shaqsiyaadkani lahaayeen awoodo kala duwan oo la xirriirta safarkoodii ay ku tageen deegaanadda argagaxisada iyo nolosha kala duwan ee ay la soo kulmeen, waxeeyna dib ula soo laabanayaan dhacdooyin kala duwan oo salka ku heeysa jihooyin kala duwan” ayey markale . tiri Bettan.
Bettan waxaa kale oo ay sheegtay in kooxihii ay la kulantay oo dib ugu soo laabtay dalka ay markoodii horeba eeysan u bixin arrimo diimeed ee ay salka ku heeysay xaaaldo xun oo ay doonayeen ineey ka dheeraadaan.
“Kuwii aan la kulmay waxeey ii sheegeen in “Diintu” eeysan aheyd mid dowr weyn ka qaadatay safarkoodii, haddan sidoo kale kolkii ay dib u soo laabteen. Dhamaantoodna xaalado qalifsan oo kala duwan ayaa ku kalifay ineey kooxahaas u safraan” ayey tiri Bettan oo ka . jawaabeeysay su’aal aheyd “ma jiraan wax mideeya oo ay aaminsanaayeen?”
Ugu dambeyntiina Bettan Byvald waxaa ay sheegtay in shaqsiyaadka dib uga soo laabta kooxaha Daacish eey yihiin kuwo ka xir xirma bulshadda, qaarkoodna ay dib ugu laabtaan falal dambiyeedkoodii hore. Waana u dhaxeeya farqai weyn kolka bilooyin iyo sanado lala soo joogo kooxahaasi.
Bishii abriil ee sanadkan ayaa waxaa la soo saaray sharci gebi ahaanba mamnuucaya in dalka dibadiisa loogu safro si fal argagaxiso loo sameeyo, waxaana ay mudanayaan xabsi ciddi lugu helo.
Stockholm: Dibad bax looga soo horjeedo cunsuriyiinta Islaamka neceb
Gabdhaha Muslimiinta Xijaabka xirta oo bartilmaameed ka noqday Sweden
Kulan looga hadlayey dhalinyaradda kooxaha xagjirka ah ku biira oo Stockholm lugu qabtay